विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट : नेटफिल्क्सको सबै कुरा एकै सेकेन्डमा डाउनलोड ! – News Np Online
काठमाडौंको एक कोठाबाट आमाले रु*दै शिशिरलाई फोन गरिन् । दौडेर जाँदा छोरालाई यस्तो..हेर्नुस (सहयोग स्वरुप सेयर गराै)
अचानक विप्लवलाई किन भेटिन रेखाले ?
मन स’म्हालेर हे,र्नुहोस बा’ध्यताले खाँ,डी दे,शमा पु,गेकी नेपा,ली चे,लीको द’र्दनाक (भिडियो)
अ’निशा’को घ’रमा गो*ली च*ल्यो ! बु’बाला’ई घि’सा’रेर स’डक’मा ल’गियो’। स्थिति त’नाव ग्रस्त
भर्खरै संसदमा हं*गामा: एक्का*सी तना*वग्र*स्त बन्यो, टेवल ठोक्दै रोष्टम घेर्न पुगे सांसदहरु (भिडियो हेर्नुहोस्)
पाथीभरा माता को दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् राशिफल वि.स २०७७ फाल्गुन २४ गते सोमबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
मुख्य पृष्ठ /Tech/विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट : नेटफिल्क्सको सबै कुरा एकै सेकेन्डमा डाउनलोड !
विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट : नेटफिल्क्सको सबै कुरा एकै सेकेन्डमा डाउनलोड !
यदी तपाईंलाई तपाईंले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट निकै सुस्त लाग्छ भने विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिको इन्टरनेटबारे सुन्नुभयो भने झनै खराब लाग्न सक्छ ।
युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका शोधकर्ताहरुले विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेटमा नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । सो गति १७८ टेराबाइट्स प्रति सेकेन्ड (टीबीपीएस) अर्थात् १ लाख ७८ हजार जीबी प्रतिसेकेन्ड रहेको थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा इन्टरनेटको औसत गति २ एमबी प्रति सेकेन्ड रहेको छ ।
उक्त परियोजना रोयल एकाडेमी अफ इन्जिनियरिङका डा. लिडिया गाल्डिनो, एक्सटेरा र किडी रिसर्चले तयार गरेको छ । यसअघि विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट अस्ट्रेलियामा दर्ता गरिएको थियो । सो बेला इन्टरनेटको गति ४४.२ टीबीबीएस रहेको थियो । अहिले दर्ता गरिएको गति चार गुणा बढी रहेको छ ।
यति तीव्र गतिको इन्टरनेटले तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंले नेटफिल्क्समा भएको सबै कुरा मात्र एक सेकेन्डमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तो तीव्र गतिको इन्टरनेट प्राप्त गर्न शोधकर्ताहरुले अप्टिक फाइबरको साटो उच्च रेन्जको वेभलेन्थ लागू गरेका थिए र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सिग्नललाई टाढासम्म बुस्ट गरेका थिए ।
यस्तो तीव्र गति प्राप्त गर्न धेरै खर्च लाग्ने अनुमान गरिनु स्वभाविक हो । तर, शोधकर्ताहरु भने यो प्रविधिको प्रयोग गर्न अप्टिक फाइबरको प्रयोग भन्दा सस्तो हुने बताउँछन् । यद्यपि, यो प्रविधि प्रयोगकै चरणमा रहेको छ र सर्वसाधारणले चाँडै यो प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।
स्रोत : हिन्दुस्तान टाइम्स
अस्पताल पुगेर ई.लाई भेटे प्रधानमन्त्री ओलीले
भारतमा ‘पब्जी’ बन्द, ‘फौजी’ आउँदै
नेपाली युवा युवतीको चमत्कार नेपालमै बनाए रकेट – अन्तर्वातामै भाबुक पाएन्न सहयोग सबै जादैछ्न अमेरिका सरकारले मदत गरेन – भिडियो सहित